Global Voices teny Malagasy » Guadeloupe : Nihanafana ny toe-draharaha ka niafara tamin’ny herisetra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Febroary 2009 7:49 GMT 1	 · Mpanoratra Jennifer Brea Nandika Lila
Sokajy: Karaiba, Goadelopa, Fanoherana, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Taorian'ny herinandro nanaovana fitakiana tamim-pilaminana tany amin'ireo departemanta Frantsay any Guadelope dia nivadika ho herisetra izany ny alatsinainy lasa teo raha nifandona tamin'ny mpitandro ny filaminana ireo mpanao fihetsiketsehana tany Point-à-Pitre. Toherin'ny mpiasa mantsy ny fitomboan'isa tsy an-kijanona ireo tsy an'asa sy ny fiakaram-bidin'ny zavatra ilaina andavanandro izay afarana avy any Frantsa ny ankamaroany.
Ny vaovao farany, 18 febroary, 8:30 GMT : tanora nitam-piadiana iray nitifitra mpitandro ny filaminana 3, araka ny tatitra nataon'ny mpanao gazety iray ao amin'ny AFP.
Ao amin'ny serasera web Agoravox , Illiouchine , no mitantara ny zavatra hitany tany Guadeloupe tamin'ny faran'ny herinandro sy ny alin'ny alatsinainy taorian'ny herisetra nampalahelo ny teratany Frantsay monina any an-toerana iray :
Tsara be ny andro tamin'ny maraina, niposaka tsara ny masoandro, tsy nisy rahona sady tsy nandrivotra. Nazava tsara ny tendron'i Soufrière (Volkano any Guadeloupe). Tazana tsara ny setroka nanaka-danitra avy ao amin'ny volkano.
Tsy nitovy tamin'izay anefa ny zava-nisy ny alina. Nisehoana herisetra mantsy ny manodidina an'i PAP (Point-à-Pitre, tanàna lehibe indrindra any Guadeloupe): afo, fandrobana toeram-pivarotana. Mazava ho azy fa tsy voaroba ny mpivarotra madinika : ireo toeram-pivarotana zavatra mikasika ny fanatanjahan-tena sy ny kojakoja momba ny fiara no tena lasibatra tamin'izany. Nisy ny sakan-dalana vaovao isan-karazany napetraka io maraina io. Tony ny préfet kanefa nilaza izy fa tsy maintsy hosokafana ny lalana voasakana. Amin'izao fotoana izao dia milamina aloha ny ao Sainte-Claude, mivoha ny mpivarotra ary manohy ny asany andavanandro ny mponina.
La Guadeloupe en colère  (ny fahatezeran'i Gaudeloupe) no azo anambarana ny zava-nisy ny alatsinainy maraina :
Omaly maraina dia nasian'ireo mpitokona sakana ny lalana rehetra mankany amin'ireo toerana saro-pady.
…Ireo miaramila maro avy ao amin'ny zandarimaria, izay nalefa tany amin'ny nosy hatramin'ny nanombohan'ny fifandonana, no nanala ireo saka ireo. Dia niseho tokoa ny tokony hiseho. Nanoloana ny fihenjanan'ireo mpitokona dia voatery nampiasa hery ireto miaramaila. Maro tamin'ireo mpitokona no voasambotra, eo amin'ny 50 eo ho eo, ary novotsorana ny androtr'iny ihany ry zareo rehefa avy notazonina kely fotsiny.
Malahelo ny trangan-javatra aho satria matoa miseho ny herisetra dia midika izany fa tsy nahomby ny fifampiresahana. Iza no diso? Nu fanjakana ve? sa ny fikambanana? sa ireo lehibe? Ny rehetra satria mahafantatra ny vahaolana daholo ireo !
Nifoha tamim-pahalainana aho. Henoko mantsy fa may ny toeram-pivarotana gazety (tabac-presse) izay anisan'ny toerana tokana ahafahana manovo fahalalana ato amin'ny nosy. tena tafintohina aho. Lasa niasa ihany aho, nahafantatra tsara ny tokony hataoko ary angamba azo atao hoe koa nazoto. Nampiantso anay anefa ny lehibe ary nandefa anay nody, satria mihamafana ny toe-draharaha.
Dia lasa aho…mirehitra ny fanariam-pako eny an-dalana…
Izay aho vao nanontany voalohany teo amin'ny fiainako hoe ho aiza aho…
Nanroatra i Parfait:
Mba tsy hitsarako ny zava-misy dia aoka hatao an-tsaina fa i Guadeloupe dia vao 400 taona monja no nisiany ary mbola tanora noho izay aza ny mponina (tamin'ny fanafoanana ny fanandevozana?). Fiaraha-monina vao manomboka ny anay, hafiriana no nilain'i Frantsa hahatongavany amin'izao zava-misy ankehitriny izao?…
Caro ao amin’ ny a comment on a Rue89  no manazava ny fototry ny olana ka nampisy fifanolanana :
Ny tena fahotana goavana, araka ny hevitro, dia ny fikasana hikitihana ny barazin'i Guyane tamin'ny volana desambra lasa teo (satria tany Guyane no nisy fihetsiketsehana voalohany), ary sty nanao na inona na inona ny tany Guadeloupe sy Martinique na dia efa anhian'ny maro aza ny hisian'ny fitokonam-be.
Navelan'ny fanjakana hiharatsy ny toe-draharaha na dia efa fantany aza fa leo ny mponina, ny tsy fananan'asa mitombo izay tsy izy ary mihalafo vidy ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro.
Nahazo vola be ny DOM, fa tsy ny tanan-dehibe ihany; nisy koa ny famatsiana avy any Erôpa (satria maiaraka amin'i Erôpa izy…), kanefa tsy nisy vokany teo amin'ny vahoaka io vola io ka nitarika ny fahantrana…
…Raha tsy tian-dry zareo hihanaka any amin'ny faritra hafa (DOM) rehetra izy ity (efa vonona hanohy fitokonana ny any Guyane rehefa vita ny karnavala, efa mihetsika koa ny any La Réunion), dia tokony hitady vahaolana amin'izay hitantana ny vola hanampiana ny vahoaka ry zareo fa tsy hanome izany ho an'ireo tale intsony. Kanefa tsy mifanaraka amin'ny filôzôfian'ireo mpitantana izany.
Inona no hiafaran'izy ity? Mitaintaina isika. Tokony hisy fanohanana avy amin'ny tanàn-dehibe ary hampiseho fa miray hina isika. Izay miseho any amin-dry zareo mantsy dia mahakasika antsika koa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/02/19/1575/